जानी राख्नुहोस् है ! सबै समस्याको समाधान डीएनए परीक्षण नहुन सक्छ !
ARCHIVE, NEWSPAPER » जानी राख्नुहोस् है ! सबै समस्याको समाधान डीएनए परीक्षण नहुन सक्छ !
“विज्ञान असजिलो पनि हुन्छ, यसले सामाजिक संरचना हेर्दैन । जे छ, त्यो देखाइदिई हाल्छ । कहिलेकाहीँ त डीएनए नगराइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । सबै समस्याको समाधान डिअक्सिराइवो न्युक्लिक एसिड अर्थात् डीएनए नै त होइन नि ?”
“मानाँै, ३०÷४० वर्षपछि ती बच्चाहरू डीएनएका लागि आए भने के जवाफ दिने ? विज्ञानले यस्तो अवस्थामा के कसरी न्याय दिन सक्छ ?”, रिजाल प्रश्न गर्नुहुन्छ । अदालतको पछिल्लो निर्णय डीएनएको नतिजाविपरीत गयो भन्ने कुरा मलाई पनि धेरैले सुनाए तर अदालतले जे ग¥यो त्यो सही ग¥यो । म अदालतको निर्णयलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छु”, कार्यकारी निर्देशक रिजालको भनाइ छ ।